गोरखाली अन्धराष्ट्रवादका विरुद्ध समाजवादी क्रान्ति जरुरी «
गोरखाली अन्धराष्ट्रवादका विरुद्ध समाजवादी क्रान्ति जरुरी
प्रकाशित मिति : ११ आश्विन २०७५, बिहीबार ०२:२९
प्रस्तुती : ई. रुम्दाली
‛नेपालमा उत्पीडित वर्ग,जाति, क्षेत्र एवं महिलाको दुश्मन गोरखाली अन्ध–राष्ट्रवाद विरुद्ध लेनिनको जस्तै समाजवादी क्रान्तिको कार्वाहि जरुरी छ ।’‐ गोपाल किराती
यी माथिका भनाई नेकपा माओवादी(केन्द्र)का संयोेजक गोपाल किरातीले संप्रेषण गरेका हुन् । विचार, सिद्धान्त र संगठनको डबलीमा अनगिन्ति अनुभव संगालेका किरातीले केहीअघि फेसबुकमार्फत उक्त भनाइ व्यक्त गरेका हुन् । जहाँ उनले माओवादी विज्ञानको अभावमा जनजातिवाद, मधेशीवाद वा दलितवादले मात्र वर्णश्रममा आधारित ब्राह्मणवादको अन्त्य नहुने उल्लेख गरेका छन् । भने नेपालमा गोरखाली‐अन्धराष्ट्रवादको विरुद्ध लेनिनले जस्तै समाजवादी क्रान्तिको कार्वाही जरुरी भएको समेत औल्याएका हुन् । यही भनाइलाई आंशिक व्याख्या गर्न खोजिएको हो । के‐हो अन्धराष्टवाद र समाजवादी क्रान्ति ? आम पाठकका सहजताका लागि पनि आवश्यक सामग्री तयार पारिएको हो ।
अन्धराष्ट्रवाद एउटा खतरनाक प्रवृति हो । जहाँ जाति, भाषा,धर्म र समुदायका साथै राज्यविशेषले आफुलाई महान र सर्वश्रेष्ठ ठान्ने प्रवृति हुन्छ । अरुमाथि हैकम कायम गर्ने, धम्की र बल समेत प्रयोग गर्न पछि नपर्ने राष्टवाद अन्धराष्ट्रवाद हो । यसमा आफनो शक्तिलाई गलत रुपमा आँकलन गर्ने र आफ्ना कुराहरु अरुले मान्नुपर्ने हुन्छ । आफुलाई विशिष्ट र अरुलाई छुद्र ठान्ने प्रवृति यो राष्ट्रवादले जन्माउँछ । यसमा आफना गल्ती र गरिएका अनुचित कुराको समेत समर्थन गरिने हुन्छ । यो अन्धराष्ट्रवादको ज्वलन्त उदाहरण जर्मनका नाजी प्रवृत्तिलाई लिन सकिन्छ । जर्मनका नाजीहरुले आफुलाई सर्वश्रेष्ठ र विश्वमाथि शासन गर्न इश्वरले सृष्टि गरेका हुन् भन्ने भावनाले अन्तत : दोश्रो विश्वयुद्ध निम्तिएको थियो । नाजी भावना नै अन्धराष्ट्रवादको चरम नमूना हो । यसरी अन्धराष्ट्रवादका कारण जर्मनले नराम्ररी हार खानुपरेको इतिहास ज्यूँदो छ । त्यस्तै गोपाल किरातीले पनि अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै सुधारात्मक चेतावनीका रुपमा गोरखाली‐अन्धराष्ट्रवाद उल्लेख गरेका हुनसक्छन् ।
पुँजीवादी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी स्थापित हुने सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको व्यस्था समाजवाद हो । यसमा पुँजीवादी अवशेषलाई नष्ट गरिन्छ । र, उत्पादनका साधनलाई श्रमिकवर्गको नियन्त्रणमा लिइन्छ । समाजवादको परिपक्व चरण भनेको साम्यवाद हो । साम्यवादमा पुँजीवादका अवशेषहरु समाप्त हुन्छन् । सम्पुर्ण उत्पादनका साधनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्वको अन्त्य हुन्छ । र, सामाजिक स्वामित्वमा पुग्ने शोषणरहित समाजको सिर्जना हुन्छ । यसमा आर्थिक वर्गहरुको अस्तित्व समाप्त हुन्छन् । तसर्थ वर्ग समाजमा आधारित राज्यविहिन सामाजिक व्यवस्था साम्यवाद हो । यसमा सामूहिक उत्पादन हुन्छ । र, क्षमताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसारको उपभोग्यवस्तुहरु उपलब्ध गरिन्छ ।
समाजवाद स्थापनाका लागि गरिने क्रान्ति समाजवादी क्रान्ति हो । यो मजदुरवर्गको नेतृत्वमा पुँजीवादविरुद्ध गरिने क्रान्ति हो । यसबाट समाजको आमूल परिवर्तन हुन जान्छ । यो पूँजीवादबाट समाजवादमा संक्रमणको अवस्था हो । सामाजवादी क्रान्तिले सहयोग तथा पारस्परिक सम्बन्धको स्थापना गर्दछ । मानिसद्धारा मानिसमाथि हुने शोषणलाई समाप्त गरिदिन्छ ।
‛समाजवादी क्रान्ति’ सिद्धान्तको प्रादुर्भाव
यो सिद्धान्त माक्र्स र एंगेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्र १८४८ मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । उनीहरुले समाजवादी क्रान्ति सामाजिक विकासको स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने कुरा सिद्ध गरे । साथै मजदुर वर्गको विश्वव्यापी ऐतिहासिक लक्षसँगै समाजवादको निर्माणका लागि सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व स्थापनाको आवश्यकता समेत पुष्टि गरियो । मजदुरवर्गद्धारा सत्तामाथि कब्जा गर्नु क्रान्तिकारी रुपान्तरणको आरम्भमात्र भएको उल्लेख गरिएको थियो । समाजवादी क्रान्ति सामाजिक विकासको स्वभाविक प्रकृया भएकाले विश्व सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व स्थापनाको आवश्यकता समेत पुष्टि गरिएको छ । सारत : आ‐आफनो मुलुकको चरित्रअनुसार समाजवादी क्रान्तिको सिद्धान्तको सिर्जनात्मक विकास र प्रयोग गर्ने काम भएका छन् ।
‐ माक्र्स–लेनिन धारणा
मजदुर वर्गद्धारा सत्तामाथि कव्जा गर्नु क्रान्तिकारी रुपान्तरणको आरम्भमात्र हो । र, नयाँ समाजको रुपान्तरणका लागि लामो अवधि लाग्दछ । यसलाई माक्र्सले पूँजीवादवाट साम्यवादमा रुपान्तरण हुने संक्रमणकाल भनेका छन् । लेनिनले एकाधिकार उन्नत बनाएर सन् १९१७ मा रुसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका थिए । उनले यो क्रान्ति कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा मजदुरवर्गको सहयोगबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने रणनीतिक र कार्यनीतिक सिद्धान्तका रुपमा प्रतिपादन गरेका थिए ।
‐बुर्जुवा जनतान्त्रिक सिद्धान्त
पूँजीवादी राज्यहरुमा मजदुरको सहयोगमा समाजवादी क्रान्ति गरिन्छ । तर सामा्रज्यवादी र सामन्तवादी व्यवस्था भएका मुलुकमा समाजवादी क्रान्तिका लागि बुर्जुवा जनतान्त्रिक क्रान्तिको सिद्धान्त माओत्सेतुडले विकास गरे । र, नयाँ जनवादबाट समाजवाद र साम्यावादसम्मको यात्रा गर्ने सिद्धान्त अघि सारे । यसमा किसानको नेतृत्वमा मजदुरवर्गको सहयोगमा क्रान्ति सम्पन्न गर्ने सिद्धान्त रहेको छ ।
ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुमा नवमाक्र्सवादीहरुले अत्यन्त शोषित भएका क्षेत्रबाट गुरिल्ला युद्धका आधारमा अगाडि बढेका छन् । र, सत्ता कब्जा गरेर समाजवाद–साम्यवादमा जाने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् । खासगरी यसको नेतृत्व चे–ग्वेभाराले गरेका थिए । भने यसको प्रयोग क्युबामा सन् १९५९ मा भएको थियो ।
‐नेपालमा समाजवादी क्रान्तिको प्रयोग
नेपालमा पनि समाजवादी क्रान्तिलाई फरक ढंगले प्रयोग गर्ने जमर्को गरिएको थियो । माओवादीहरुले आर्थिक वर्गका साथै सामाजिक वर्गका उत्पिडक समुदायको सहयोगमा सशस्त्र संघर्षबाट सत्ता कब्जा गर्ने लक्ष लिएका थिए । र, जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गरेर समाजवाद‐साम्यावादमा पुग्ने रणनीति अपानाएको पाइन्छ । यसरी समाजवादी क्रान्तिद्धारा पुँजीवादी व्यवस्थाको उन्मुलन गर्दै समाजवादको स्थापना गर्न खोजिएको थियो । यो सँगै साम्यवादमा पुग्ने क्रान्तिका साथै नयाँ जनवादलगायतका स्वरुपहरुको पनि अभ्यास भएको पाइन्छ ।
‐गोपाल किरातीको समाजवादी क्रान्ति
गोपाल किरातीले लेनीनले जस्तै गरी समाजवादी क्रान्तिको कारवाही भनेर उल्लेख गरेका छन् । जसरी लेनीनले मजदुर वर्गको अगुवाइमा किसानहरुको सहयोगमा १९१७ मा क्रान्तिमार्फत पुँजीवादी व्यवस्थालाई ध्वस्त गरी समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरे, त्यस्तै क्रान्तिको संकेत गरिएको हुनसक्छ । र संकेतमात्रै होइन, शोषक वर्गको स्थानमा शोषित वर्गले राज्य सत्ता कब्जा गर्दै जारशाहीको शासनलाई उन्मुलन गर्ने लेनीनकै शैलीमा किरातीपनि अग्रसर देखिन्छन् । यसैबाट देशको उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र एवं महिलाको दुश्मनलाई समाजवादी क्रान्तिबाट कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएका हुन् । जुन उनको व्यक्त विचारबाट अनुमान गर्न सकिन्छ ।